Waa wax lagu qoslo baradho. Tartanka Sawirka Ingiriiska - Nidaamka Baradhada
Waa wax aan caadi aheyn oo ku saabsan baradhada. Tartanka sawir gacmeedka Ingiriiska
"Dhamaadka go'doominta." Ray Spence
Photocrowd, oo ah goob sawir qaadayaal ah, ayaa soo koobtay natiijadii tartankii ugu horreeyay ee sawir qaade ah ee Sawir-baradkii Sannadka, ka-qayb-galka ay lagama maarmaan u ahayd in "si gaar ah loogu muujiyo baradhada farshaxanka sawir-qaadista," ayuu qoray TJournal.
Guulihii la gaadhay wuxuu ahaa Ray Spence, oo sawiray sawir baradho ah oo la beeray oo la googooyay. Ciyaartaan kama dambaysta ah ayaa helay kamarad Fujifilm XA-7, oo sannad ah xubin ka ahaanshaha bulshada sawirrada ee Boqortooyada Ingiriiska Royal Photographic Society, aqoon isweydaarsi lala yeeshay qaban qaabiyaha tartanka Benedict Brian iyo saddex sano oo laga diiwaangeliyay Photocrowd.
LLC "Mangazeya Agro" wuxuu xoojiyaa maamulka shirkadda
Waxay rabaan inay soo bandhigaan VAT eber dukaamada internetka ee Ruushka
Feejignaan! Dalab gaar ah oo loogu talagalay qalabka GRIMME!
Rosselkhoztsentr oo ku sugan Komi ayaa u sheegay sida loola macaamilo jeermiska bakteeriyada sanadlaha ah ee baradhada
Si aad u codsato tartanka, waa inaad bixiso shan euro. Dhamaan tabarucaada waxay u tageen hay'adda 'Trussell Trust', oo cunto siisa dadka saboolka ah ee ku nool Boqortooyada Midowday.
Tags: Boqortooyada Ingiriiskatartan sawir sawir baradho ah
Shirkadda "Melagro" ayaa Yurub gaarsiisay 5,5 kun oo tan oo baradho ah sanadkii la soo dhaafay
Farqiga Ivan Pireyev wuxuu dul saaray 100 tan oo baradho ah miiska Novgorodians
Webinar AHDB: Xaalufinta. Sida loo dalbado waxyaabaha kale ee loo beddelo
Rajada laga qabo suuqa baradhada ee Boqortooyada Midowday. Dib u eegista AHDB
Iibsadayaasha Boqortooyada Ingiriiska ayaa ku boorriyay inay iibsadaan baradhada maxalliga ah si ay uga iibsadaan wax soosaarkooda beeralayda ah
ECE waxay dejisay waajibaadka ka hortagga daadinta dhirta ee UK
Hogaamiyaasha qudaarta qudaarta ah ayaa isugu soo ururay Maalinta Beerta Dheriga ee 'Primerye Day'
Shaybaar cusub oo taranka ayaa laga abuuri doonaa gobolka Samara
Baradhadu ayaa laga goostaa gobolka Tyumen
Cheinbinsk baradho webinar ayaa baradhada lagu qabtay